एउटा फिल्ममा अभिनय गरे बापत बलिउड स्टारले कति पारिश्रमिक लिन्छन् होला ?
१० आश्विन २०७४, मंगलवार | Sep 26, 2017 | 20:16:33
By synergyfm on	 July 7, 2017 मनोरञ्जन
एउटा फिल्ममा अभिनय गरे बापत बलिउड स्टारले कति पारिश्रमिक लिन्छन् होला ? सहजै अनुमान गर्न गाह्रो छ । जब-जब फिल्म हिट हुन्छ, उनीहरुको मूल्य पनि त्यही अनुरुप आकासिन्छ । जस्तो कि, ‘बजीराव मस्तानी’ सुपरहिट भएपछि रणवीर सिंहले आफ्नो पारिश्रमिक तीन गुणा बढाए । त्यसअघि उनले तीन देखि पाँच करोड भारु लिदै आएका थिए । अब उनी भारु दश करोड लिन थालेका छन् ।
वरुण धवनको अहिलेसम्म आठ वटा फिल्म प्रदर्शनमा आइसकेको छ । यसमध्ये कुनैपनि फिल्मले घाटा व्यहोर्नु परेन । उनले एउटा फिलमबाट पाँचदेखि सात करोड भारु लिन्थे । तर, ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ पछि उनको पारिश्रमिक भारु १० देखि १२ करोड रुपैयाँ भयो ।